င ဝန် န ဒီ: May 2012
မြန်ပြည်သူ ပြည်သားတွေ မြန်ပြည်ပြန်ဖို့မြန်ပြည်ကသာ လုပ်ဆောင်တာ အကောင်းဆုံးသာဖြစ်မှာပါ
&lt;p&gt;&amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;gt;မြ&amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;gt;&lt;/p&gt; မြန်ပြည်သားတွေ အချင်းချင်းတွေ့ ဖို့ နိူင်ငံတကာထွက် မှ တွေ့ ရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ.. အချိန်တန် အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ အရင်ကထက် စောလာနိူင်ပါစေ.. ငဝန်နဒီ
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:59 AM No comments:
မြန်ပြည် ခဏလေးဆို ပြန်တာ ၂၄ နှစ် ကြာမှ နိူင်ငံတကာ ကို ပြန်ထွက် လာရတယ်..ပေးဆပ်မှု တွေ အတွက် လေးစားစွာဖြင့်
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:51 AM No comments:
ဆန္ဒ ပြ ပွဲ များ အတွက် တွေးမိသော ချော်ထွက် သော အတွေး
အခု ဆန္ဒပြ ပွဲ တွေ ဖြစ်တော့ လွတ်တော် ကနေ သီးသန့်စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးတာ မရှိတာပါ..
မလို လို့ မလုပ်ပေးတာလား ဒါဆို ဒီလိုဖြစ်အောင် မြှောက်ထိုး ပင့်ကော် လုပ်ပြီး ဒီမို ကရေစီ ကို မကောင်းသတင်းထွက်အောင် လုပ်နေတာလားပေါ့
ဖယောင်းတိုင်းမီး ဆန္ဒပြခွင့် ပေးသလို စပါးနှံ ကိုင်သူတွေကို ဘာလို့ဆန္ဒပြခွင့် မပြုတာလဲ..
ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ဆောက် ဖို့တစ်ဖက်လှည့် နဲ့ဖယောင်းတိုင် ဆန္ဒပြပွဲ ကိုသာ ခွင့်ပြုတာလား
ဖယောင်းတိုင်ကြောင့် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ပေါ်လာရင်တော့ လျှပ်စစ် ရဖို့တဖက်လှည့် နဲ့ ထောက်ခံ ခိုင်း နေတာလား
အကြပ်ရိုက်နေသော ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံပေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာရော မဖြစ်နိူင်ဘူးလား
အလုပ်သမားအရေး အတွက် အခြေခံလစာ အတွက် အစိုးရ မဖြေရုင်းပေးတာက နိူ်င်ငံတကာ က ဝင်လာမဲ့ သူတွေ မသိမသာ ကြောက်အောင် ချောက်ပြနေတာလားပေါ့
အခြေမခိုင်သေးပေမဲ့စနစ်ကျသင့်တာတွေ ကို မလုပ်ပေးတာလား
ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး တို့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကို ပြန်ဆောက်ဖို့ဖွလိုက်တာ က တိုင်းပြည် မငြိမ်အောင် ပြန်ကြိုးစားနေတာလားပေါ့
ဒီမိုကရေစီ စနစ် ပျက်အောင်ကြိုးစားနေတာလားပေါ့
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ နှင်းသဘင် အဆောက်အဦး ဆို အတွင်းသာ ပြင်ဆင်လို့ ရတာပါ..
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ နှင်းသဘင် အဆောက်အဦး အပြင် ကို ဆေးသုတ်လို့ တောင် မရပါဘူး
ဆေးသုတ်တာနဲ့နိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အရေးအခင်းဖြစ်တာ ဓမ္မတာပါ..
ဒါတွေ ကိုသိရက်နဲ့တမင်သက်သက် လုပ်နေတာ ဆို မြန်ပြည် အတွက် ရင်လေးစရာ ပါ..
အရာရာ ကို ရိုးသားစွာ နဲ့ဒီမို ကရေ စီ ကို ပေးအပ်သူ နဲ့လက်ခံ နိူင်သူ များဖြစ်စေချင်တာပါ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:41 PM No comments:
တိုကျို မြို့ နံနက်ခင်း နေ နှင့် လ နှစ်ပါးသွား
ဒီနေ့နံနက်ခင်း နေ နှင့် လ နှစ်ပါးသွား က နံနက် ၇ နာရီ ၃၂ မိနစ် တိုကျို စံတော်ချိန် မှာ တွေ့ စဉ်
နှစ်ပေါင်းတော်တော် ကြာမှ တွေ့ တဲ့ ဖြစ်စဉ်ပါ..
အိမ်အပေါ် ကနေ မျက်စိနဲ့ ကြည့် ရတာ တော်တော် ကို ကြည့်ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ..ရိုးရိုး မျက်စိနဲ့ ကြာကြာတော့ ကြည့်လို့ မကောင်းဘူးပေါ့
ဓာတ်ပုံ ရိုက် ရင်တောင် ဖလင်ပြား အနောက်ခံပြီး ရိုက်မှ ရတာ ကိုး..
မျက်စိနဲ့ တိုက်ရိုက် မကြည့် သင့် ပေမဲ့ နောက် ထပ်တွေ့ ရဖို့ မှ မလွယ်တာ သဘာဝ ကို သဘာဝ အတိုင်း ခံစား ကြည့် တော့ မှန် အနောက်ခံ ကြည့်တာနဲ့ဒီအတိုင်း ကြည့် တဲ့ အရသာ ဘယ်လိုမှ ထပ်တူ ချမရပါဘူး...
ဒါပေမဲ့ နေ နှင့် လ တော့ ရှေ့ တည့်တည့် မှာ ထပ်တူ ကြနေလေရဲ့ 
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:01 PM 1 comment:
စိတ်ဖြေ မှ ပေါ့ မောင်ကာလု ရယ်
တလောက တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ လာသွားတော့ လူတွေ က အာဇာနည် ကုန်းကိစ္စ ကို ဟိုအပြစ်တင် ဒီအပြစ်တင်ပြောတော့
ကို ပေါဆန်း နဲ့ မောင်ကာလု စကားပြော ကြတော့
ကိုပေါဆန်း........မင်း က ဘယ်လိုထင်လို့ တုန်း
မောင်ကာလု.....ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ ငါတို့ ကို စော်ကားသွားသလိုကြီးပေါ့
ကိုပေါဆန်း........ဒီလိုကွ ဦးတိဘွား ကိုးကွယ်တဲ့ သူတွေ ဘုရား အနေကဇာ တင်သလိုပေါ့ကွာ..
ကိုပေါဆန်း.......ဦးတိဘွား ရုပ်ထု အကြီးကြီး ကို နောက်ခံ ထား ပြီး ဘုရားရုပ် သေးသေးလေး ကို အရှေ့ ထား
ပြီး ဘုရားအနေကဇာ တင်တယ်ဆိုပြီး ဘုရားကို ကတော့ ခိုင်းလိုက်တော့
ဦးတိဘွား ကို အလိုလို ကတော့ ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပေါ့ မောင်ကာလုရဲ့ 
မောင်ကာလု....ဒီလိုပဲစိတ်ဖြေရမှာပေါ့ ပေါလည်းပေါတတ်ပါ့ ကွာ..
( တကယ်အတွေးကတော့ သူတစ်ပါးထိခိုက် နစ်နာ မှာ စိုးသဖြင့် အဆင်ပြေအောင် လမ်းလွဲ ဟာသ ရေးလိုက်ရပါသည်)
Posted by ငဝန်နဒီ at 4:21 PM No comments:
သူလို သဌေး က ငါလဲ လုပ်တတ်တာပေါ့
အစိုးရ နဲ့ ပေါင်းပြီး ချမ်းသာလူတွေ ကို သဌေး ကြီးတွေ လို့ သတ်မှတ်လာတော့
အစိုးရကို လာဘ်ပေး ပေါင်း ပြီး
လယ်တွေ သိမ်း ကားတွေ သွင်း သူလယ် ကို ကိုယ့်လယ် လုပ်
ပြည်သူတွေ ကားကို သူကားလုပ်
အလုပ် အယောင် ပြ ပစ္စည်းတွေ သွင်း
ဝယ်ခွင့် တစ်ယောက်ထဲ ရအောင် လုပ်
၅ ဒေါ်လာတန် ဆင်းကဒ် ကို နှစ်သိန်းနဲ့ရောင်း
ဘာအတွေးအ ခေါ်တတ်လည်း ဘာပညာ တတ်လည်း
ဖားတာ ပညာလား ပေါင်းတာ အတတ်ပညာလား
လူတကာမျက်ရည်တွေ တွေ စိန်စီနေတာ ကို အခမ်းနားဆုံးဆို
ကဲ ဘာတွေ လုပ် ဘာကုပ္မဏီတွေ ဖွင့်ပြီး တစ်နှစ် ဝင်ငွေ ဘယ်လောက် ရလို့ လည်း
အမှန်တကယ် ဝင်ငွေပြောတာ နည်းပညာ တွေေ ရာင်းစားလို့ ရတာလား
လုပ်အားခ ခေါင်းပုံဖြတ် ခွတုတ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ သဌေး ကတော့
ကုန်ကုန် ပြောရရင် နွားစားကျက် ကို တောင် မချန်
နွားစာ တွေ ပါ ဝင်စားနေ မှာတော့
အဲလို သူ ဘယ်သူ ယှဉ်နိူင်မှာတုန်း..
အဲလို နဲ့ပြော ပြတဲ့ တစ်ယောက် က
မယုံရင် သူ့ ပါ မေးကြည့် မေးငေါ့ ပြတော့
နွားကြီး က ဘွတ်အဲ တဲ့..
ငါတော့ သဌေးမဖြစ်ရင်နေ နွားစာ တွေ တော့ ဝင်မစားပါရစေနဲ့ တဲ့
...ပွင့်လင်းမြင်သာသောစီးပွားရေးဖြင့် ချမ်းသာ ကြီးပွားနိူင်ပါစေ...
သမ္မတကြီးဆိုရင် နူတ်ထွက်စာ ဘယ်မှာတင်ရပါ့
အခုတလော ဒုသမ္မတ က နူတ်ထွက် စာ သမ္မတ ဆီမှာ တင်တယ် ဆိုတွေ ကြားရတာရယ် သမ္မတ ကြီး ကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေး မကောင်းတာတွေ ကြားရတော့ မြန်ပြည်သား တစ်ယောက် အနေနဲ့ တွေးမိတာကတော့ သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် နူတ်ထွက်စာတင်ရင်
ဘယ်သူ့ ဆီမှာ တင် မှာလည်းပေါ့
သမ္မတကြီး နူတ်ထွက်စာ တင်စရာနေရာ မရှိတော့
မထူးပါဘူး ၂၀၁၅ အထိ လုပ်ကိုး လုပ်ရတော့မှာပေ့ါ..
တင်မယ်ဆိုရင်လည်း မြန်ပြည်သူ ပြည်သားတွေ နဲ့ ဆိုင်သလို
ဒီမိုကရေစီ လမ်းကို စလှမ်းနေသူ
လွတ်လပ်မှု ကို ပေးအပ်သူ
မြန်ပြည် အိမ်ကနေ ကို လက်ကမ်းခေါ်သူ
နိူင်ငံ အတွက် နိမ့်ကျစွာ နိူင်ငံတကာ ကို ဆက်ဆံပေးသူ
ပြီးတဝက် လုပ်လက်စတွေ နဲ့လိပ်ခဲတည်းလည်း ဒီမိုကရေစီ လမ်း ခင်းလက်စ တွေ
ဆက်လက် ပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းစွာ နဲ့ လုပ်နိူင်ပါစေ..
သမ္မတ အထက်က ဘယ်သူရှိလို့နူတ်ထွက်စာ တင်စရာ ပျောက်နေတာတော့ အမှန်ပါပဲ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:41 AM No comments:
သူတို့က ရဲ တွေ ကိုး ..မြန်ပြည် ပြန်မည့် သူတွေ ကဲ အခု ဘယ်လိုပြန်မလဲ...
မြန်ပြည် ပြန်မည့်သူတွေ ရဲ က ရိုက်ဖို့ စောင့်နေ တာ နမူနာ သ တင်းလေးပါ...
သူမှာ တုတ် တရားဝင် ကိုင်ခွင့် ရှိတော့ တုတ်ပဲပေါ့
သေနတ် ကိုင်သူတွေ ကကော...
ကဲ အခု ဘယ်လိုပြန်မလဲ...လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတောင် လိုက်ရိုက်တော့
ပြေးစရာနေရာ လည်း မရှိတော့ လေလွင့် ရမဲ့ ရွက်တွေ ကလည်း အလုပ်မလုပ် တော့
သွေးသံရဲရဲ ခေါင်းတွေ က နီနီ ရဲ နေတော့
ရဲ တွေ က လည်းလိုက်လိုက် ရိုက်နေတော့ အိမ်ပြန်မည့် သူတွေ လည်း အိမ်မပြန် ရဲလေ တော့
သမ္မတ ခေါ် လည်း ဦးခေါင်း ပတ်တီးဖွေးဖွေး မြင်ယောင် မိလေတော့
ကဲ အခု ဘယ်လိုပြန်မလဲ...
မြန်ပြည် တရားမျှတသော ဥပဒေ နှင့် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ လှမ်းနိူင်ပါစေ
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:14 AM No comments:
၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မည်သူမဆို နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်ခွင့် ရှိကြောင်း
နိုင်ငံခြားငွေကြေးသုံး အစိုးရဘဏ်များတွင် ဒေါ်လာ အကောင့်ဖွင့် ချင်သူတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB နှင့် မြန်မာ့ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဘဏ် MICB တို့တွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မည်သူမဆို နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်ခွင့် ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် မှ ရရှိသောသတင်းများအရ သိရသည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:51 AM No comments:
မြန်ပြည်ဘဲ ပြန်မှာနော် တရုတ်ပြည်ပြန်ဘူး
မနေ့ တစ်နေ့က သမ္မတ က မြန်ပြည်သားတွေ ပြန်လာဖို့ ခေါ်တော့
မြန်ပြည်တော့ ပြန်ချင်လိုက်တာ ဆိုတော့
မြန်ပြည်သူ က ပြန်ချင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ ရှင်တရုတ်စာ ဖတ်တတ်လို့ လားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်က တရုတ်လိုပဲရေးထားတာ...မြန်ပြည်စစ်စစ်ဆိုလို့ 
လမ်းဘေး သေးမပေါက်ရ ကတော့ မြန်မာလိုတဲ့တော့
တရုတ်တွေ ကို ပဲ မြေတွေ ရောင်းနေတာ ရှင်လယ်လုပ်ချင်ရင်တောင် တရုတ်ဆီမှာ မြေအငှားဝယ်နေရအုံးမယ်
မန္တလေးသားစစ်စစ်တောင် စကားဝဲကုန်တာကြာပေါ့
အော် မြန်ပြည်ပြန်မှာပါဆို တရုတ်ပြည်ဆိုပြန်ဘူး
ဒါနဲ့ ရှင်ပြန်ရင် တရုတ်စာ သင်ပြီးမှ ပြန်နော်တဲ့..
မြန်ပြည် ကို ပြန်စေချင်တာ က ဘာကို လိုချင်တာလဲ(၁)ငွေ(၂)နည်းပညာ(၃)အတွေ့ အကြုံ
နိူင်ငံတကာက မြန်မာတွေ မြန်ပြည် ကို သမ္မတက ပြောတော့
ဒီနေရာ မှာ ပြန်လာစေချင်သောကြိုဆိုမှု ကို လှိုက်လှဲ စွာ ကြိုဆိုပါတယ်
ဘာအတွက်ပြန်လာစေချင် တာ ကို သိချင်လာပါတယ်...တိုင်းပြည်တိုးတတ်ဖို့ ဆိုတာ လက်ခံပါ...
အချက်တွေ ကို ကြည့်ရအောင်...
နိူင်ငံခြားငွေ ပြန်ဝင်လာစေချင်တာလား ..အရင်းအနှီးလာ လုပ်စေချင်တာလား..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်တွင်း ကို ငွေ ရောက်ဖို့ ဆိုရင်
ပြန်လာမှရယ်မ ဟုတ်ပါဘူး တရားဝင် ကင်းလွတ်စွာ နဲ့ပို့ ခွင့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရင် တရားဝင် ငွေတွေ မြန်ပြည်ထဲ စီးဝင်တာက မှ ပြန်တာထက် မြန်ပြည် ငွေ ပိုရောက်မှာပါ..
အရင်းအနှီးမြုပ်နှံ လူသူတွေ အတွက်လည်း တရားဝင် ကင်းလွတ်မြုပ်နှံခွင့် ပြုရင် အကောင်းဆုံးပါ
ငွေပြန်ရင်းနှီးမည့်သူ ကို ဟိုရစ်ဒီရစ် ပြဿနာတွေ ရှိနေရင်တော့ အဆင်မချောနိူင်ပါဘူး
နည်းပညာတွေ ဆိုလို့နည်းပညာ သစ် ပစ္စည်းတွေ သွင်းတာ ကို စီးပွားဖြစ်သွင်းသူတွေ ထံက အခွန်ကောက်တာ ကောင်းပေမဲ့
ပါစင်နယ်အသုံးပြုဖို့ပို့ တာတွေ ကို သိမ်းတာ အခွန်ကောက်တာတွေ လုပ်နေရင်တော့ နည်းပညာ သစ်တွေ သုံးပစ္စည်းတွေ မြန်ပြည်ထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး
ဥပမာ နှလုံး ECG စက်ကလေးက မီးခြစ်ဘူး သာသာလေး ကို ပို့ ပေးချင်ရင်တောင် တရားဝင်သွားဖို့ မလွယ်တာပါ..
သွေးခုန်နှုန်းတိုင်းစက် ဆို အင်တာနက်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး နိူင်ငံတကာ ကနေအချက် အလက်တွေ ကြည့်ပြီး
ပြည်တွင်း နည်းပညာ ကို လက်တစ်ဆုပ်စာ ကလက်ဝါးကြီး အုပ်ထားတာရယ်
ကွန်ပျူတာ မလို အီးမေးလ် လက်ခံလို့ ရတဲ့ ပရင့်တာတွေ ဆို လူကြီးတွေ အဆင်ပြေပေမဲ့ 
တန်ဖိုးထက် လက်ခကြီးသော အခွန်ရယ် အရစ်ခံရမည့် အဖြစ်တွေ နဲ့နည်းပညာ သစ်တွေ မြန်ပြည် ဝင်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး
လူလုပ်အား ကို အခြားနေရာ မှာအသုံးကျစေမဲ့ အချိန်သက်သာစေမဲ့
စကားပြောစရာ မလိုသောစက်တွေ ပို့ ရင် ပါစင်နယ်ပို့ ရင် ရစ်တာ တွေ အခွန်တွေက ပစ္စည်း အဟောင်း အလကား လှူချင်ရင်တောင် ခက်နေတာပါ.. ခိုးလုပ်တဲ့ နည်းတွေ ရှိနေပေမဲ့ တရားဝင် ပွင့်လင်းရင်ကောင်းမှာပါ..
အဝတ်လျှော်စက်ဆို တစ်ခါတည်းခြောက် တဲ့ စက် ပန်းကန်ဆေးတဲ့ စက် တွေ ခလုတ်နှိပ်ရုံနဲ့အိမ်ဖော်မလို
လက်ထိုးထည့် ရေထွက် စနစ် အော်တို အလိုလို ရေပိတ်စနစ်တွေ ဂက်စ်မီးဖို ဆို ဆီပူ အိုး အပူမြှင့်လာရင် အလိုလို လျှော့ ပိတ်တဲ့ စနစ်တွေ လွတ်လပ်စွာ ပါစင်နယ် သုံး ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာထိ ခွင့်ပြုမူတွေ ရှိရင် ၆လ တစ်နှစ် ဆို နည်းအသစ်တွေ မြန်ပြည်ထဲ စီးဝင်လာမှာပါ
အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာတွေ လုပ်ကိုင်ပုံ နည်းစနစ်တွေ ဆိုလည်း နည်းပညာသစ် ဆော့ဝဲလ်ယားတွေ ကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးစေချင်တာပါ..
ဥပမာ အဆောက်အဦး ဆွဲ နည်းပညာဆော့ဝဲလ်ယား တစ်ချို့ ဆို မြန်မာငွေ သိန်း ၅၀ ကနေ သိန်း ၁၀၀ နီးနီးရှိပါတယ်...
ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာတွေ ဆိုလဲ တရားဝင်ခွင့်ပြုစေချင်တာပါ အင်တာနက် သုံးရတာနှေးနေချိန်မှာ ဒေတာ ထရန်စဖာ လုပ်ဖို့ကိုယ်ပိုင် ဒေတာပို့ တာကို ကီလိုမီတာ ၆၀ ကနေ ကီလိုမီတာ ၈၀ ထိပို့ လို့ ရတဲ့ နည်းပညာတွေ ကို တရားဝင် ဖြစ်စေချင်ပါတယ်..မိုင် ၃၀ ကျော်အထိ အင်တာနက် မလို ဒေတာတွေ ပို့ လို့ ရတဲ့ နည်းပညာပါ..
ငါးဖမ်းတာတွေ ဆိုလည်း ရေဒါ စနစ်တွေ အသုံးပြုခွင့် တရားဝင်ခွင့်ပြုဖို့ ရယ် ဝင်ရောက်လာမည့် စနစ်တွေ ကို စီးပွားဖြစ်သမားတွေ ဆီကတော့ အခွန်ကောက်ပြီး တစ်ချို့ တွေ ကို ကင်းလွတ်စေချင်တာပါ...
နည်းပညာ လည်ပင်းညစ်ခံရတဲ့ အဖြစ်ကတော့ နည်းပညာတတ်လူတွေ ကို ဖိနှိပ်တဲ့ လူတွေ ရှိနေသေးသရွေ့ တော့ ထင်သလောက်နည်းပညာ ဝင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး
(၃)ကိုယ်ကာယ နှင့် အတွေ့ အကြုံ
လုပ်အားပါ နှင့် အတွေ့ အကြုံတွေ ကတော့ နိူင်ငံတကာ က ရမှာ ဆိုတော့ အတော် ကို အကျိုးအမြတ်ရနိူင်သော အသိပညာနဲ့အလေ့အကျင့် ဗဟုသုတတွေ ပါ ရမှာပါ..
ဖိနှိပ်သော စိတ်ဓာတ်ရယ် အာဏာရှင်ဆန်သောစနစ် လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေး သမားတွေ လက်ထဲမှာဆို ရှိတာတွေ ထုတ်မသုံးပဲ ဖျောက်ထားရင်တော့ ပြန်မလုပ်ကြတာတွေ ရှိနေမှာပါ...
တစ်ချို့ ဖိနှိပ်မှုတွေဖြေလျှော့ နိူင်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ..
ကတော့ မြန်ပြည် မပြန်ပေမဲ့လည်း မြန်ပြည် က အကျိုးရှိနေအောင် အခွင့် အလမ်းပေးရင် မြန်ပြည် အမြတ်ရမှာပါ...
(၃) ကိုယ်ကာယ နှင့် အတွေ့ အကြုံ ကတော့
ကိုယ်တိုင်ပြန်မှ မြန်ပြည်က ရနိူင်တာ ဆိုပေမဲ့
ခဏတာ ပြန်လည်ပြီး အတွေ့ အကြုံ ဆွေးနွေးပွဲ တွေ လုပ်ခွင့် ကို လွတ်လပ်စွာ ပြောခွင့် ပေးရင်
မပြန်ပေမဲ့ အလည်အပတ် ကို သက်တောင့်သက်သာ စီးမျှောခွင့် ရရင် အဆင်ပြေမှာပါ..
အခုရေးတာတွေ က မြန်ပြည် ကို မြန်မာတွေ မပြန်သေးပေမဲ့ မြန်ပြည် ထဲ စီးမျှော စေမဲ့ ဟာလေးတွေ ကို စုစည်းပြီးရေးလိုက်တာပါ...
Posted by ငဝန်နဒီ at 6:30 PM No comments:
ပြန်တော့ပြန်မှာ မပျံတတ်လို့ 
သမ္မတ ကြီးကခေါ်တော့ နိူင်ငံတကာ မြန်မာတွေ ပြန်ချင်ကြမှာပါ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ တစ်ခုခုဆို ကျော်တတ် လွှားတတ် လုပ်တတ်မှရယ်
ညဆို အိပ်တတ်တဲ့ ငှက်တွေ လို အိပ်တတ်ရင်လည်း အကောင်းသား
ကားကျပ်ရင်လည်း ကျော်လွှား ပျံလို့ ရတဲ့ ကားမဝယ်နိူင်သေးတော့
ပြန်တော့ပြန်ဖြစ်ပါတယ် နေ့ ခင်းအိပ်မက်ထဲ မှာ တကယ်ကို ပြန်ဖြစ်ပါတယ်
ပျံတတ်တဲ့ တစ်နေ့ နေ့ တော့ ပြန်ဖြစ်မှာပါ...
မြန်ပြည်သားတွေ က ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပဲ
Posted by ငဝန်နဒီ at 5:12 PM No comments:
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိူင်ငံတော် နိူင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝက်စ် စာမျက်နှာ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိူင်ငံတော်
ပွင့်လင်းမြင်သာသော အစိုးရသစ် ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိူင်ငံတော် ကို ကိုယ်စားပြုနိူင်သော သမ္မတ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု ကို မှတ်တမ်း အဖြစ်ထားထားသော ဝက်စ်စာမျက်နှာ ကို ဖတ်ရှုနိူင်တာက ဝမ်းသာစရာပါ...
မြန်ပြည် ကို လွယ်လွယ် ညွှန်ပြနိူင်သော စာမျက်နှာ လို့ ဆိုရမှာပါ..
အရင်က အာဘော်တွေ ကိုသာ ဖတ်ရတာပါ အယူအဆ အမျိုးမျိုး နဲ့ပါ အခုတော့
သမ္မတ လုပ်ဆောင်မှုတွေ နိူင်ငံတော် အကျိုး သယ်ပိုးပုံတွေ အကောင်းတွေ စုထားတာတွေရယ် လိုတာတွေ ပါ အကြံပြုနိူင်တာတွေ ပါ တဖြည်းဖြည်း လက်ခံနိူင်လာရင် အတိုင်းထက် အလွန် ကောင်းလာတော့မှာပါ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:37 PM No comments:
ဂျပန်ကား လမ်းညွှန် ၅၆-၅၇-၅၈ (၂၀၀၉-၂၀၁၂)
စာအုပ်တွေ ကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က ကညန က အင်ဂျင်နီယာတွေ အတွက် ဆိုပြီး မှာပေးပါဆိုလို့မှာလိုက်တာစာအုပ်ဖိုးက ယမ်း ၆၀၀၀ ကျော် ပို့ ခ က ယမ်း ၈၀၀၀ ကျမယ်လည်းဆိုတော့ မဝယ်တော့ ဘူး ဆိုပြီး သူက လွယ်လွယ်ပြော လိုက်ပေမဲ့
ဒီမှာ က ဝယ်မယ်ဆိုပြီး ဝယ်မည့် နေရာ ကို ဖုန်းဆက်ပြောပြီးမှ သူ က ဖျက်လိုက်ပေမဲ့ပြောပြီးသား စကား မပြင်ချင်တာရယ် အားနာတာနဲ့ဒီ ၃အုပ်တော့ ဝယ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ ဂျပန်ပြည်တွင်းတောင် ပို့ ခ ယမ်း ၆၀၀ ထပ်ပေးလိုက်ရတယ်...
မှာတဲ့ သူငယ်ချင်း က ဘာမေးလ်မှ မလာတော့ပေမဲ့ လူကြုံ သယ်မဲ့ သူရှိရင် ပို့ ပေးမယ် လုပ်ပေမဲ့ သူဆီက ဘာမှ မလာတော့ အခုတော့ အများအတွက် အကျိုးရှိအောင် တင်ပေးဖြစ်တာပါ...
အတွင်းက တစ်ချို့ကိုတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်းတင်ပေးပါမယ်..
ကား အလှည့်ပြီးရင် အိမ်အလှည့်
မြန်ပြည် မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ လုပ်နေတာ အခု ဆက်သွယ်ရေး ဆိုရင် ဖုန်းဈေး သိန်းဆယ်ဂဏန်း ကျော် ကနေ အခုတော့ ၂သိန်း အထိကျလာပါတယ်
ကားဆိုရင်လည်း သိန်းထောင်ဂဏန်း ကနေ သိန်း ရာဂဏန်း အထိကျလာပြီး သိန်းရာဂဏန်း ရှိရင် ကို ကားစီးလာနိူင်တာ ကို တွေ့ ရမှာပါ ဒါကတော့ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ကို လုပ်ဆောင်တာကနေ ရတဲ့ အကျိုးဆက်ပါ..
ဒါပေမဲ့ စားဝတ်နေရေး ဆိုတာရဲ့အဓိက အချက် ဖြစ်တဲ့ နေရေး ကို မလုပ်သေးတာ အချိန်ကို စောင့်နေရပါတယ်
အခုတော့ နိူင်ငံတကာ မှာလေ့လာနေပါတယ်..
အကျိုးဆက်ကတော့ ကားပါကင်ကောင်းကောင်း အိမ်ကောင်းကောင်း တွေ ပေါ်လာမှာဖြစ်သလို စည်းကမ်းတကျ လုပ်ရင်း နစ်နာသူတွေ ရှိလာမှာပါ..
ဈေးတတ်လာနိူင်တယ်လို့ ထင်နေမှာပါ ..ဈေးတတ်ရခြင်း အရင်းအမြစ် ကို ကြည့်ရင် တဖက်လှည့်နဲ့နိူင်ငံခြားသားတွေ ကို မြေ အိမ်တွေ ရောင်းနေလို့ ပါ..အသိမ်းခံနေရလို့ ပါ..
တစ်ချိန်က တိုက်အသစ်တွေ ဖော်လိုက်တာ တိုက်ခန်းဈေးက ဆောက်စရိတ်သာသာ လောက်ပဲ ဈေးဖြစ်သွားတာကို ပြန်အမှတ်ရသူတွေ ရှိနေမှာပါ..
အခုလည်း တိုက်တွေ ကို ပါကင်ရော အထပ်မြင့်ရော ဆောက်လိုက်ရင် မီးအတွက်ပါ ဆိုလာစနစ်တွေ ပါလုပ်လိုက်ရင် ဈေးတွေ ကျလာမှာပါ..
ကားလိုပဲ တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်လာလိမ့်မှာပါ..ချက်ချင်းကြီးတော့ မပြောင်းပါဘူး ချက်ချင်းပြောင်းလိုက်ရင် အထိနာသူတွေ အတွက် အရမ်းဆိုးဝါးသွားနိူင်ပါတယ်
သမ္မတ က အရှိန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ တွေ ပြောနေပေမဲ့ အရမ်းမြန်လွန်းရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး တွေ က ပိုများမှာပါ..
လိုအပ်ချက်တွေ ကို တစ်ထစ်ပြီး တစ်ထစ် တွက်ချက်ပြီး လုပ်ဆောင်ရင် ပြည်သူတွေ အတွက် ကို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် လူတိုင်း နေစရာ ရှိရင် စားရေး ကို တစ်ဖြည်းဖြည်း စဉ်းစား လုပ်ဆောင်လို့ ရမှာပါ...
ချက်ချင်း ဆိုရင် ဒေါ်လာဈေးထိုးကျရင် အထိနာသလိုမျိုးပါဘဲ.. မနစ်နာဘူးဆိုတာ ဘူးခါငြင်းနိူင်ပေမဲ့ အကျိုးဆက်ကို အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲ ရင်ဆိုင်ရတာပါ..
ကားမှာ လူဦးရေကိုတွက်ပြီး သွင်းခွင့်ပေးတာပါ အိမ် ကို လည်း လူဦးရေ နဲ့ တွက် လိုတာ လုပ်လိုက်ရင် လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်နေစရာတွေ နဲ့ ဖြစ်သွားမှာပါ..
စားရေး ကိုတော့ လစာ ကို ချိန်ညှိလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်..
လူတစ်ချို့အတွက် အကောင်း သည် လူအချို့ အတွက် ပျက်လင့်သည်မှာ ဓမ္မတာ တည်း ဆိုပေမဲ့..
အနည်းဆုံး နစ်နာမှုကို ထည့်တွက်ခြင်းသည် ငြင်သာသော အပြောင်းအလဲ အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမည်..
Posted by ငဝန်နဒီ at 11:11 PM No comments:
ကား တွေပါမစ် မလို တာ ကို ကားကျပ်တာ ပါရှင်းရင် အိမ်ဈေးတွေ ပါ ကျလာနိူင်
အခု ကားပါမစ် ကို လွတ်လပ်စွာ ချပေးတာ တွက်ချက်ပြီးတော့ ချပေးတာရယ်
ကားပါမစ်တွေ ဝယ်ထားပြီး ကားဈေးတတ်အောင်လုပ်နေသူတွေ ကို ၂လ ကြာအချိန်ပေးပြီးမှ အခုလို ချပေးတာပါ...
အခု အဲလိုလုပ်လို့ကားဈေးတတ်အောင်လုပ်သူတွေ က ကားကျပ်တာ အကြောင်းပြလာပါတယ်
အဲဒီကားကျပ်တာ ကို ဖြေရှင်းလိုက်ရင် အိမ်ဈေးတွေ ပါ ကျသွားနိူင်လို့မသိမသာ လွတ်ထားတာကို
အပြစ်ပြောရင် အိမ်ဈေးတွေ ကျသွားနိူင်တာ ကို သတိမထားဘဲ စွတ်အော်နေကျပါတယ်...
တကယ်ဆိုရင် ကားတွေ ကားကျပ်တာ ကားဟောင်းတွေ ကြောင့်ရယ် ကားလမ်းမပေါ်မှာ စည်းကမ်းမရှိ ရပ်လို့ ပါ..
ကားပါကင်တွေ ဖော်ထုတ်ရမှာပါ လမ်းပေါ်ရှိသမျှကားတွေ ဖမ်းပြီး နိူင်ငံတကာမှာ ဒဏ်ငွေ ရိုက်နေကြတာပါ..
အိမ်တွေ ကို ကားပါကင် အပါ လုပ်ရမှာ ရယ် အိမ်တွေ ကို ကားတွေ လို စည်းစနစ်တကျ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြေရှင်းလိုက်ရင် အိမ်ဈေးတွေ ကျလာနိူင်တာကို သတိထားရမှာပါ...
ကားကို တစ်နှစ် မပြည့်ခင်မှာ တင် တဖြည်းဖြည်းချင်း ဈေးကျအောင်လုပ်တာပါ အလူးအလဲ စီးပွားပျက်မှာစိုးလို့ ထိန်းပြီး လုပ်တာတောင် ဝိသမ လောဘသားတွေ ပါမစ်ဝယ်ပြီး ဖျောက်ထားတာသိရော လုပ်ချလိုက်တာ မြန်ပြည်သူတွေ အတွက် တော့ အရမ်းကောင်းသွားပါတယ်..
ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ ပေါလာရင် လိုင်းကားကျပ်တာ သက်သာလာမှာပါ..
ကားကျပ်တာ လမ်းပေါ်မှာ ကားမရပ်ရ ကားပါကင် မလုပ်ရဆိုရင် ပြေလည်သွားမှာ ပါ...
ကားကျပ်တာဖြေရှင်းဖို့အိုးအိမ်ကို ပါ ကိုင်လာရင် အိမ်ဈေး တွေ အပေါ် သက်ရောက်လာရင် မြန်ပြည် အတွက်ကောင်းလာနိူင်ပေမဲ့ တစ်ချို့ တွေ အပေါ် တအားထိခိုက်လာမှာ စိုးရိမ်ရပါတယ်
နည်းနည်း ဆီပြောင်းတာ မသိသာပေမဲ့ မြန်လွန်းရင် အထိကတော့ အနည်းနဲ့အများ တော့ ထိမှာပါ...
ကား မော်ဒယ်နဲ့စာအုပ်ဓာတ်ပုံ ရိုက်တင်ပေးပါဦးမည်..စာအုပ်က ၃ အုပ် ၃ ကီလိုဂရမ်ကျော် လေးတဲ့ အပြင် စာမျက်နှာ တအားများလို့အဆင်ပြေသလောက် နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆို တစ်မျက်နှာ နှစ်မျက်နှာလောက်တော့ တင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ 
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:17 PM No comments:
မသေသင့်ဘဲ သေရသောသူ မြန်ပြည် မှာ ဘယ်လောက်များရှိနေပြီလဲ..စုန်းဆိုပြီး ၄ ရက်ကြာရိုက်သတ်
ဤပိုစ့် ကို တင်သောလည်း မကြည့်ပဲတင်လိုက်တာပါ..လူလူချင်းနှိပ်စက်ခြင်းကင်းဝေးနိူင်ကြပါစေ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 10:42 AM No comments:
ဖုန်း SIM ကဒ် ဈေးတတ်လျှင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး မှကုမ္ပဏီ ကို တရားစွဲ မည်..
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ရောင်းချသည့် မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းမ်ကဒ်များကို သတ်မှတ်
ဈေးနှုန်းထက် မြှင့်တင်ရောင်းချမှုများ ရှိနေ၍ Yadanarpon Teleport နှင့် E-lite Tech ကုမ္ပဏီတို့ကို မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးမှ ခေါ်ယူ သတိပေးထားကြောင်း မိုဘိုင်း အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးသိန်းဝင်း က ပြောသည်။
ကျပ် နှစ်သိန်းတန် GSM ဖုန်းကဒ်များနှင့် ကျပ် နှစ်သိန်းခွဲတန် WCDMA ဖုန်းကဒ်များကို ဧပြီလ အတွင်း စတင်
ရောင်းချခဲ့သည်။ သို့သော် ဝယ်လိုအားကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း သတ်မှတ်ပေါက်ဈေးထက် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်သွားခဲ့သည်။ GSM တကဒ်လျှင် ကျပ် နှစ်သိန်း လေးသောင်းအထိ ဈေးမြင့်တက်သွားခြင်း
ထိုအခြေအနေများကြောင့် သတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထက် ပိုရောင်းချနေမှုများကို ဆက်လက်တွေ့ရှိပါက တရားစွဲဆိုသွားမည်
ဖြစ်ပြီး တားမြစ်မှုများ မလိုက်နာပါက ချုပ်ဆိုထားသည့် အကျိုးအမြတ် ခွဲဝေရေးစာချုပ်များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းက သတိပေးလိုက်သည်။
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:38 AM No comments:
မင်းပြောမှ လား သိသားပဲ
ဒူးယားဆောင်မှာတုန်း က အဆောင်နေ ကျောင်းသားတွေ ဆိုတော့ မြန်ပြည် အရပ်ရပ် ကလာကြတာ ဆိုတော့
တစ်ချို့ နေရာတွေ ဆို အထက်အညာကလူ က အကျေ အရပ်က လူတွေ အရပ်ကို မသိတာတွေ ရှိတာ
လေး တွေထဲ က သတိတရ မိတာလေး ကတော့
အဆောင်က အပေါ်ထပ်မှာနေတဲ့ တိုးတိုး ကို အောက်အရပ်ဒေသ အမည်တွေ ကို မသိတဲ့
အညာသား လေး က မင်း ဘယ်အရပ် ကလာတာလဲ
တိုးတိုး က သူ့ မိသားစု အရွေ့ အပြောင်း ရှိပေမဲ့ သူမွေးရပ်မြေ ကို မေးတယ်ထင်ပြီး အရင်နေခဲ့တဲ့ အရပ် ကို
လက်ဦးက ပေါင် မှာ နေတယ်..
အညာသား ပြန်ပြောလိုက်တာ ကတော့
မင်းပြောမှ လား ငါသိပြီးသား
တိုးတိုး သူ့ ကို မပြောပြချင်လို့ညစ်လိုက်တာထင်ပြီး စိတ်တိုပြီး ထွက်သွားလေရဲ့ ...
တိုးတိုး ကလည်း ထပ်ပြောလိုက် တယ်...
လက်ဦး က ပေါင် မှာကွ..
(ပေါင် က တိုးတိုး ကို အမှတ်တရ.)
စကားချပ်..တိုးတိုး မိုင်းထိလို့ခြေချောင်းလေးတွေ ပြတ်သွားပြီဆိုပြီး ကျောင်းပြီးတော့ ဘယ်သူကဖွလိုက်သလဲ မသိဘူး တိုးတိုး ကို ဖောင်ကြီးဖက် အလည်သွားတုန်း တွေ့ တော့ အကောင်းကြီးဆိုတော့..တိုးတိုး က အတင်းမေးတယ် မင်းကို ဘယ်သူပြောလဲပေါ့
ဆိုပြီး ခြေတွေ လက်တွေ မြောက်ပြ ဘာမှ မဖြစ်ဖူးဆိုပြီး သက်သေပြလိုက်တယ်..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒူးယား အဆောင်ကအဆောင်သား အချင်းချင်းဖွလိုက်တာ တိုးတိုးတစ်ယောက် မခံချိ မခံသာ ဖြစ်ကျန်ခဲ့လေရဲ့ ...သူတုန်းကပြောခဲ့တာလေး ကို ပြန်ရေးလိုက်တာပါ..
တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီး ဦးမင်းဆွေ၏ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဥပဒေစကားများ...။
ဘယ်ပါတီမှ မဝင်ထားပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိသော စကားကိုပြောသွားတဲ့
(CJ Myanmar မှ တင်ဆက်သည်။)
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:42 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်တော် ကျမ်းကျိန် ပြီး
NAYPYIDAW: Myanmar pro-democracy leader Aung San Suu Kyi was sworn in asamember of parliament Wednesday, openinganew chapter in the Nobel laureate's near quarter-century struggle against oppression. The 66-year-old stood to read the parliamentary oath in unison with 33 other members of her National League for Democracy party who were elected to the lower house in April, an AFP reporter said.
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:08 PM No comments:
မြန်ပြည်သူ ပြည်သားတွေ မြန်ပြည်ပြန်ဖို့မြန်ပြည်ကသ...
မြန်ပြည် ခဏလေးဆို ပြန်တာ ၂၄ နှစ် ကြာမှ နိူင်ငံတကာ ...
ဆန္ဒ ပြ ပွဲ များ အတွက် တွေးမိသော ချော်ထွက် သော အတွေ...
သူတို့က ရဲ တွေ ကိုး ..မြန်ပြည် ပြန်မည့် သူတွေ ကဲ...
၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မည်သူမ...
မြန်ပြည် ကို ပြန်စေချင်တာ က ဘာကို လိုချင်တာလဲ(၁)ငေ...
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိူင်ငံတော် နိူင်ငံတေ...
ကား တွေပါမစ် မလို တာ ကို ကားကျပ်တာ ပါရှင်းရင် အိမ်...
မသေသင့်ဘဲ သေရသောသူ မြန်ပြည် မှာ ဘယ်လောက်များရှိနြေ...
ဖုန်း SIM ကဒ် ဈေးတတ်လျှင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး မှကုမ...
တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီး ဦးမင်းဆွေ၏ မြန်မာ့နိုင်င...